faritr’Andohanimandroseza ny zoma 01 mey teo noho ny resaka vaky trano. Tokony ho tamin’ny 04 ora maraina no nandalo tamin’iny faritr’Andohanimandroseza iny ireto mpanao fisafoana ireto. Tamin’izany indrindra izy ireo no nahatsikaritra lehilahy maromaro milanja entana mavesatra. Nosakanana avy hatrany izy ireo saingy nandositra raha vantany vao nanatona ny polisy. Raikitra ny fifanenjehana ka lehilahy miisa 4 no voasambotra raha toa ka tafaporitsaka kosa ny 2. Fitaovana maro fampiasa ao an-tokatrano toy ny « four électrique 01, commode en cuir 01, bouteille à gaz 25kg 01 » no tratra teny amin’ireto olon-dratsy ireto ary vary 28 lasaka milanja 30 kilao isany no nafenin’izy ireo tamina lobolobo tsy lavitry ny toerana nahasamborana azy ireo. Nandritra ny fanadihadiana azy efa-dahy ireo no nahafantarana fa trano lehibe iray eny Andohanimandroseza no novakian’izy ireo tamin’io fotoana io raha sendra tsy tao an-toerana ny tompon-trano. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ireo tafatsoaka.